Ewu nwere ike iri lili canna? – Wikipedikia Encyclopedia?
My ewu ga-eri ụbọchị lillies si epupụta na okooko osisi na-egosi dịghị ihe ịrịba ama nke nsi. Ebu ụmụ anụmanụ mara oke mma ma ọ gwụla ma agụụ na-agụ ha ga- ọ bụghị eri osisi ndị na-emerụ ha ahụ.
N'otu aka ahụ, gịnị bụ Canna rhizomes?
Ahịa a na-akpọkarị "bọlbụ" ọ bụ ezie na ha abụghị ezigbo bọlbụ; egbe mụbaa n'okpuru ala site na mịtrịị mara abụba nke okporo osisi a na-akpọ "rhizome" Ọ bụrụ na ị na-eto site na mkpụrụ, mara na ọnụ ọgụgụ germination dị ala na ọ dị mkpa ka a na-ede akwụkwọ ma ọ bụ nye mkpụrụ osisi ahụ mmiri acid iji gbarie uwe ha siri ike.
Ọzọkwa, a na-eri calla lilies? Lalla lily nwere ike ịbụ ihe magburu onwe ịkpụ ifuru na anya mara mma, ya epupụta bụ oriri mgbe isi nri.
29 Ajụjụ na Azịza Yiri nke Achọtara?
Ga lili lili ga-agbasa?
Ị nwere ike iri rhizomes?
Kedu ka ị ga-esi mee ka calla lilies ghara ịda?
Okooko lili calla na -emerụ nkịta?
Kedu ihe ị ga-eme na osisi arrowroot?
Gịnị mere calla lily m ji tụgharịa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ?
Ndi ahihia ahihia bu nsi?
Gịnị mere mkpọ m ji ada?
Ulo lili nwere ike ime ka ị na-arịa ọrịa?
Kedu anyanwụ ka calla lilies chọrọ?
Kedu ka esi eme ka cannas na-eto?
Kedu ụdị okooko lili na -eri?
Enwere ike ito lilies canna n'ite?
Ogologo oge ole ka calla lilies na-adịru?
Lili calla ọ na -egbu mmadụ?
Ulo lili nke canna ọ na-agbasa?
Ị na-anwụ anwụ cannas?
Udiri canna ọ na-egbu nkịta?
Ugboro ole ka ị ga-agba mmiri calla lilies?
Udiri agụ na-abịa na agba dị iche iche?
Ọ dị mma imetụ Lily nke Ndagwurugwu ahụ?
Kedu ka ị ga-esi eme cannas isi ọnwụ?
Kedu ka ị ga-esi na-ekpo ọkụ canna lilies oyi?
Ị nwere ike ịhapụ lilies canna n'ala?
Cannas ọ na-amụba?
Ị nwere ike ito lilies canna n'ime ụlọ?
Kedu ka lilies canna si dị?
Kedu ogologo ogologo lilies canna?
The calla lili dị ka ọtụtụ bulbs ndị ọzọ, mgbasa site n'inwekwu oriọna. Bulbs ndị a nwere ike gwuputa ala, kupu ya ọzọ. Na mpaghara ebe okpomọkụ (mpaghara 8-10), calla lili nwere ike a ga-ahapụrụ gị n’ala n’oge oyi anaghị enwe nsogbu.
One ga-egwu ala n'akụkụ iyi, mmiri ma ọ bụ apiti ebe osisi ahụ na-eto, wee nweta ụdị rhizomes. Mgbe peeling oyi mkpuchi nke na-eto eto rhizome, o nwere ike ịbụ rie dị ka nri bara ụba na mmiri.
Mmiri ahụ kpuchie ọnụ otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ kwa izu, tupu elu 1 inch nke ala akpọọ nkụ kpamkpam. Nye 1 ruo 2 sentimita mmiri n'ubi ọ bụla ka ala ahụ wee nọgide na-agba mmiri ruo omimi 6-inch. Enweghị mmiri na-eme ka alaka ya daa ma daa mbà nke mere na ha enweghị ike ịkwado ịdị arọ nke ifuru ifuru ma ọ bụ ifuru.
Ha bụ ndị otu arum ezinụlọ, na agbanyeghị na perennials ndị a na -adọrọ adọrọ na ngosipụta, amaara na ha dị na-egbu egbu na nkịta. Lalla lily nsi na nkịta na-eme mgbe nkịta rie ihe niile ma ọ bụ akụkụ nke a Calla lily osisi. Na Calla lily nwere ogige na -agbachitere eke nke a na -akpọ calcium oxalate anaghị agbaze.
Jiri ya dị ka thickener
Arrowroot ntụ ntụ nwere ike a ga-eji dị ka ụzọ isi sie ofe, stews, gravies, na sauces. Ị do nke a site n'ime ka a "slurry." Gwakọta ihe akụ akụ n'ime mmiri oyi dị ka mmiri ma ọ bụ mmiri ara ehi na-abụghị mmiri ara ehi ma gbanye ruo mgbe ire ụtọ.
Green spathes na-abụkarị nsonaazụ nke ọnọdụ ọkụ dị ala. Kpuchie ọnụ nsogbu ifuru nwekwara ike ibili site na oke nitrogen. Osisi ndị na-akụ ifuru chọrọ fatịlaịza kwesịrị ekwesị ma ọ bụ nke dị ntakịrị karịa na phosphorus. Ọkwa dị elu nke nitrogen nwere ike ịla azụ nguzobe nke blooms na-akpata green calla lily okooko osisi.
Isi mmalite nke nsị: Ọtụtụ osisi nke ụdị Lilium na Hemerocallis dị oke nsi. A na-akpọkarị Tiger, Day, Asiatic, Easter, ma ọ bụ Japanese Show lily, osisi ndị a na-ebute oke akụrụ akụrụ. Niile n'akụkụ nke osisi - na akwukwo, pollen, azuokokoosisi, ifuru na-atụle nsi.
Teknụzụ, mgbọrọgwụ nke egbe bụ rhizomes, ma a na-akpọkarị ha bulbs n'ihi na usoro mgbọrọgwụ ya yiri nke bọlbụ kpochapụwo. N'ebe ihu igwe na-ekpo ọkụ (USDA hardiness zones 7 ruo 10), kanna bulbs nwere ike be ekpe na ala n'oge oyi na na ihu igwe ndị a, osisi na-arụ ọrụ reliably dị ka perennials.
Ndị ọzọ lili ka ọnụ, akpịrị, ire na egbugbere ọnụ gị ga-ada ụda ma ọ bụrụ na e rie ha. Nri nwere ike na- akpata mkpọnwụ usoro mkpọnwụ, oge ufodu obi ọnụego, mgbagwoju anya, digestive iwe, afọ ọsịsa ma ọ bụ agbọ. Skin iyatesịt nwere ike ime na ụfọdụ ndị mmadụ na-abịa na kọntaktị na akụkụ ụfọdụ okooko lili, karịsịa sap.
Ozugbo osisi ahụ nwere akwụkwọ ole na ole, ị nwere ike ịmalite ịgbara ha mmiri ka ọ dị mkpa. N'ebe ndị na-ekpo ọkụ, calla lili na-eto nke ọma na zuru anyanwụ ma ọ bụ ndò ndo. Na ngwa nju oyi ha na-eto kacha mma na zuru anyanwụ. Lalla lily bulbs kwesịrị kụrụ 2 ka 4 "miri emi banyere 6" iche.
Isi mbibi kanna lilies nile na-eto eto n'oge ka na- ha na-eto ruo ogologo oge o kwere mee. Beepụ okooko osisi sitere na gị kanna lilies na-akpụ akpụ na igba ogwu ubi shia; nke a na-akpali kanna lilies na-emepụta ọzọ gburugburu ifuru.
Iji mee ka ihe ghagbue, ụbọchị lili a na -akpọ ya mgbe ụfọdụ tiger okooko lili. Mana nke ahụ bụkwa aha a na -anabatakarị nke Lilium lancifolium, lily Asia nke nwere ntụpọ na -egbu egbu, nke nwere ntụpọ. okooko osisi (bụkwa oroma) na akwụkwọ na -egbu egbu. Otú ọ dị, a na -eri blọb ya mgbe esiri ya.
7 gaa na 10 ụbọchị
Calla lili nwere kristal oxalate calcium na-adịghị soluble nke yiri osisi ndị ọzọ na ezinụlọ Araceae. Mgbe a na-eri nri, kristal ndị a na-ebute mgbu, ihe isi ike ilo, ụda nwa oge na ọzịza. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ihe ọṅụṅụ nke osisi na-abanye na akpụkpọ ahụ, mgbu, ọkụ na ọzịza nwere ike ime.
Ahịa (Canna spp.), Ụdị nke osisi okooko osisi na ebe okpomọkụ, mgbasa ngwa ngwa n'okpuruala site na rhizomes ma na-achọ nkewa kwa afọ ole na ole iji chịkwaa rhizomes ma gbochie ya egbe site n'ịbụ ndị mmadụ jubigara ókè. Canna lilies tolite 2 ruo 6 ụkwụ ogologo ma mara mma nke ukwuu mgbe a kụrụ ya n'azụ ifuru dị mkpụmkpụ.
Ịkwụsị ego efu Canna Ọbara
ụfọdụ kanna lilies na-eme nnukwu mkpụrụ osisi ojii, ebe ndị ọzọ na-adịghị ike. Hapụ ifuru ma ọ bụ abụọ gbazee wee lelee ya - ọ bụrụ ị ahụghị ka mkpuru osisi na-etolite, ị adịghị mkpa isi ma ewezuga ihe ịchọ mma. Osisi ahụ ga-eto ngwa ngwa ọhụrụ stalks na okooko osisi. Ọ ga-ewe obere oge.
Nke a bụ ihe ọzọ na ala mmezi osisi nke dị mfe na-eto eto. Ha na-enye perennial agba enweghị nwere egwu gị nkịta ahụike. E nwere ọtụtụ ụdị okooko lili nke ahụ dị elu na-egbu egbu na nkịta ma bute oke nwamba ihe egwu, tinyere: Udo lily.
Debe ala nke ukwuu. atọ obere ntakịrị kwa izu ole na ole iji gbochie bulbs ịta nkụ. Ebe a na-echekwa ihe ọkụkụ kwesịrị dị obere iru mmiri ma ọ bụghị ya, bulbs na-akpụ akpụ wee ire ere. Mgbe ọnwa abụọ ma ọ bụ atọ gachara, laghachi Calla Lily gị ruo ebe na-ekpo ọkụ na-egbuke egbuke wee malite atọ.
Otu esi eme ka ọ dị oyi na Canna Lily
Gwuo cannas gị ma chekwaa ya maka oge oyi. Nke mbụ, belata ha ka ọ bụrụ sentimita 6 ruo 8 n'ịdị elu.
Hapụ cannas gị n'ubi wee belata ha ka ọ dị sentimita 8 ruo 10 n'ịdị elu. Kpoo mulch gburugburu isi ruo omimi nke 2 ruo 3 sentimita asatọ.
Hapụ cannas gị n'ubi wee belata ha azụ ka ọ dị sentimita 4 ruo 6 n'ịdị elu.
O kwere omume nke ọma iweta a kanna na akwukwo ma ọ bụ oge ntoju n'ime ụlọ, dị ka ị ga-eme weghachi n'ime ụlọ ụlọ ọ bụla ị'd tinye n'èzí maka okpomọkụ, na-edebe ya -eto eto niile oyi. Ma ọ bụghị ya, ọ bụrụhaala na ala na-anọgide na-ekpo ọkụ, na osisi ga na- -eto eto ma na-eto eto n'afọ niile.
A gaghị eri akwụkwọ ndị ahụ, raw ma ọ bụ sie. All akụkụ nke ọkacha mmasị m mmiri osisi, na lili nke ndagwurugwu, nwere ike na-egbu egbu ma e rie ya. Enweghị nsogbu na aka ha, ọ bụ ezie.
Hapụ ifuru ma ọ bụ abụọ gbazee wee lelee ya - ọ bụrụ na ịhụghị pọd mkpụrụ osisi na-etolite, ịkwesighi isi ma ewezuga ihe ịchọ mma. Ọ bụrụ na ị na-atụnye ego ejiri kanna blooms, kpachara anya. Ọhụrụ buds na-etolite ozugbo n'akụkụ okooko osisi ndị mefuru emefu. Beepụ naanị ifuru na-ada ada, na-ahapụ buds n'ebe.
Mmiri ozuzo na ifufe ga-eme ka okporo osisi ahụ pụta daalu nu. Ọ bụrụ na a kụrụ ya na anwụ zuru oke, nsogbu nwere ike ịbụ usoro mgbọrọgwụ adịghị ike. Gbalịa itinye Triple Super Phosphate nke a -ada. Triple Super Phosphate ga-akpali uto mgbọrọgwụ ọhụrụ n'elu na -ada, Oyi, na mmiri.
Ahịa kụrụ na Mpaghara 7 na okpomọkụ-nke na-adịghị ahụkebe oyi oyi-nwere ike be ekpe na ala niile oyi. Na mpaghara 6 na oyi karịa, ịa ga-achọ ịma gị kanna rhizomes na mbubreyo ọdịda mgbe ị gbuchara ntu oyi mbụ gị ma ọ bụrụ ị chọrọ itolite ha ọzọ n'afọ ọzọ.
Dị ka osisi iris, kanna ụdị rhizomes ba uba ngwa ngwa na n'ikpeazụ okenye rhizomes n'etiti uka nwere ike kpagbuo. Nkerisi perennial toro egbe kwa afọ 3-5 ga-eme ka ha na-eto eto na obere ahụ ike.
The canna lily Osisi ahụ bụ rhizomatous perennial nwere ebe okpomọkụ.dị ka akwụkwọ na nnukwu ifuru ndị yiri nke iris. Canna lilies bụ mmezi dị ala ma dị mfe itolite, ma okooko osisi ha na akwụkwọ ndụ ya na-enye agba na-adịte aka n'ogige. Agba ifuru nwere ike be uhie, oroma ma ọ bụ odo.
ebe obibi na ubi, landscaping